2) N'iji tube na-egbuke egbuke ma ọ bụ usoro kpo oku ọzọ, enwere ike dochie ọkụ ọkụ ngwa ngwa.
DMD nnukwu igwe eletriki igwe eji eme ihe eji eme ihe
1. mkpuchi ọkụ n'elu-okpomọkụ, leaking ọkụ akpaka mkpu.
2. Mkpuchi mkpuchi dị ala, na ikuku nchebe dị ala.
3. kpụ ọkụ n'ọnụ ngwaọrụ obere circuit, bufee akpaka ike gbanyụọ nchebe.
4. Thermal mkpụmkpụ circuit na-emeghe sekit njehie mkpu na-akpaghị aka.
5. Enwere ike ị nwetaghachi ozi mkpu na mmejọ.
1) Ngwa ngwa dochie ikpo ọkụ na tube radiant ma ọ bụ usoro kpo oku ọzọ.
2) Thermocouple na-ebubata, njikwa okpomọkụ ziri ezi na ndụ ọrụ dị elu.
3) Quantitative mgbapụta ebuli impeller imewe, mmezi oge kwa ụbọchị.
1) na Siemens PLC akara center, 14′ ultra-nnukwu agba ihuenyo mmetụ.
2) nwere ike ịghọta ọrụ dịpụrụ adịpụ.
3) Ntugharị KOFLOC na-ebubata na-achịkwa ikuku na-echebe, na-echekwa gas ma na-echebe crucible.
Thermocouple ebubata, njikwa okpomọkụ ziri ezi yana ndụ ọrụ dị elu.
Ntupụta mgbapụta ngwa ngwa na-asọpụta, oge mmezi karịa ụbọchị 30.
A na-eji tube na-ebufe ihe na-emepụta ihe pụrụ iche na-eguzogide corrosion, nke nwere ike gbanwee ngwa ngwa, na oge nlekọta bụ ihe karịrị ụbọchị 30.
Preheater na-anabata usoro mpịachi iji mee ka njikwa ọkwa mmiri kwụsie ike na nri ziri ezi.
Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na-eji okpomọkụ fọdụrụnụ maka ojiji, na mmetụta preheating dị mma.
Oriri ike dị ala, ọnụego mgbaze dị elu.
Ngwa nchekwa gas zuru oke, ngwakọta gas na-edo edo, mmiri kwụsiri ike, nchekwa zuru oke, nwere ngwaọrụ ngbanwe akpaka.
A na-eji bismuth mee efere ígwè bi-metal composite, anaghị emerụ mmiri magnesium, ma nwee ogologo ndụ ọrụ.
Igwe ọkụ ụlọ ọrụ magnesium alloy eji eme nnwale na-ejikarị na ụlọ nyocha, ọkachasị maka ebumnuche nyocha na nkuzi. Ụdị nha a abụghị nnukwu. Ọ nwere ọrụ zuru oke ma nwee ike gboo mkpa nke iji. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị nwekwara ike hazie mmepụta dị ka ndị ahịa chọrọ.
Magnesium alloy dosing mgbapụta
tube mbughari maka nhicha dị mfe.
Vector servo moto, egbochiri ọkụ eletrik.
Mere nke pụrụ iche alloy ígwè magnesium crucible
Magnesium alloy crucible abụghị naanị ihe dị mkpa nke magnesium alloy oven oven, kamakwa otu n'ime ihe ndị bụ isi nke ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nke nwere mmetụta dị ukwuu n'ịdị mma na ịrụ ọrụ nke magnesium alloy oven oven. Nke a bụ ụdị akụkụ nke na-adịghị ike, nke dị mkpa ka a dochie anya ngwa ngwa ma ọ bụrụ na mmebi, ka ọ ghara imetụta àgwà na arụmọrụ nke mmepụta.
Magnesium mmiri mmiri nnyefe ọkpọkọ
Nke a bụ ọkpọkọ nnyefe maka mmiri mmiri magnesium alloy. A na-ejikarị ya eme njem n'ọnụọgụgụ na mmepụta ihe nkedo magnesium alloy die, melite ogo mmepụta na arụmọrụ, yana izute ihe ndị dị elu chọrọ nke magnesium alloy die casting production. Nke a bụ ụdị akụkụ ndị na-adịghị ike, nke nwere ike dochie anya ozugbo enwere ike imebi, ka ọ ghara imetụta àgwà na arụmọrụ nke mmepụta.
Preheater maka Magnesium Dosing Furnace
Sistemụ njikwa mechiri emechi nwere ntụkwasị obi. Mgbe otu ihe emechabeghị, a ga-akwụsị ihe ọzọ na-akpaghị aka ma tụọ ụjọ, ọrụ ahụ dịkwa mma na ntụkwasị obi.
Nri akpaaka, belata ike ọrụ.